प्रदेश सरकारले समयमा चेकजाँचको दायरा नबढाएकाले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम बढेको छ ।
सतर्कता, चेकजाँच र उपचारमा जोड नदिँदा सुदूपश्चिम कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनेको छ । लकडाउनअघि भारतबाट आएकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण खासै नदेखिएको अनुमान लगाउँदै अहिले सीमाको आवागमन खुला छ । लकडाउनका बेला मात्रै स्वदेश फर्किएका नेपालीमा तीव्र रूपमा कोरोना पुष्टि भइरहेको छ ।
पाँच जना मात्रै कोरोनाका बिरामी देखिएका बेला दुई महिनासम्म कडाइका साथ लकडाउन गरियो । तर, अहिले दैनिक एक सयको अनुपातमा कोरोनाका बिरामी पुष्टि भइरहेका बेला भने प्रदेश राजधानी धनगढीसहित पहाडी जिल्लाको आवागमन सुचारु हुन थालेको छ । केही स्थानीय तहले मात्रै फेरि लकडाउन घोषणा गरे पनि प्रदेश मुख्यालयको चहलपहल भने पुरानै लयमा फर्किएको छ ।
आठ दिनमा नौ सय संक्रमित
धनगढीको पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला र काठमाडौँका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुदूरपश्चिममा असार १ देखि ८ गतेसम्म ८ सय ९७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । आठ दिनमा दुवै प्रयोगशालाबाट २ हजार १ सय १५ जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो ।
जेठ ३२ सम्म सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या २ सय ६४ थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार असार १ देखि ८ गतेसम्म धनगढी प्रयोगशालामा १ हजार ४ सय ९६ जना र काठमाडौँ प्रयोगशालामा ५ सय ७५ जना गरी २ हजार १ सय १५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
प्रदेशभरि अहिलेसम्म ११ हजार ५ जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ६१ पुगेको छ । पुष्टि भएका पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ सय ६५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका ३ सय ४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, डडेल्धुरामा २ सय ५, बैतडीमा १ सय ५६, डोटीमा १ सय ६१, कञ्चनपुरमा १ सय ८, अछामका ८२, बाजुराका ७२, बझाङमा २४ र दार्चुलामा १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ६ हजार ६ सयभन्दा बढीको नतिजा आउन बाँकी छ । धनगढीको प्रयोगशालाको दैनिक जाँच क्षमता २ सय ५० भएकाले साढे छ हजार नमुना काठमाडौँ पठाइएको र काठमाडौँ पठाइएकामध्ये अझै ५ हजार ९ सय ३ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टिनमा बसेर आरडीटी पोजिटिभ आएका, संक्रमित भएर घर गएपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको स्वाबका नमुना काठमाडौँ पठाइएका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले यही अनुपातमा संक्रमित बढदै गए भने सुदूरपश्चिम ‘कोरोनाको हटस्पट’ बन्ने खतरा रहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘चेकजाँचको दायरा अझै सोचेअनुसार बढाउन सकिएको छैन । क्वारेन्टिनमै बसेका, लक्षण देखिएका र आरडीटी पोजिटिभ आएकाको पनि समयमा स्वाब परिक्षण गर्न सकिएन ।’
चैत ११ मा लकडाउन भइसकेपछि बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले कैलाली, डोटी र बैतडी गरी तीन ठाउँमा पीसीआर मेसिनसहित प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको एक हप्तामै बसेको अर्को मन्त्री परिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिमका लागि २० थान भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू बनाउने पनि निर्णय ग¥यो । तर, तीन महिनासम्म न तीन स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना भए, न २० वटा भेन्टिलेटरको आईसीयू नै बन्यो ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले तीन पटक पीसीआर र भेन्टिलेटरका लागि टेन्डर आह्वान ग¥यौँ, तर कसैले बिड गरेन । विश्वभरि नै पीसीआर मेसिन र भेन्टिलेटरको अभाव छ । कसरी प्रयोगशाला स्थापना गर्नु ?’ यसपालि भने टेन्डर परेको र असारभित्रै तीनै ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना हुने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको प्रयोगशाला स्थापना र भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू निर्माणमा देखिएको अर्कमण्यतापछि स्थानीय स्तरबाटै रकम उठाएर सोमबार मात्रै डडेल्धुराका लागि पीसीआर मेसिन ल्याइएको छ । दैनिक २ सय ५० जनाको स्वाब जाँच गर्न सक्ने क्षमताको उक्त पीसीआर मेसिन ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको पहलमा विभिन्न दाताबाट रकम संकलन गरी खरिद गरिएको हो ।
‘प्रदेश सरकारले तीन महिनासम्म पनि तोकिएका तीन स्थानमा प्रयोगशाला राख्न नसकेपछि, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जमानी बसेर ९६ लाखको लागतमा पीसीआर मेसिन जनस्तरबाट रकम संकलन गर्ने गरी खरिद गरिएको हो,’ मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले भने ।
चीनबाट जहाज चार्टर गरेर मगाइएको उक्त मेसिन ल्याउन मन्त्री भट्टले व्यक्तिगत रूपमा पहल गरेका थिए ।
सरकारले समयमा चेकजाँचको दायरा नबढाएकाले कोरोना समुदायमा फैलिने खतरा बढेको छ । अझ सरकारको नयाँ निर्देशिकाले त झन् समुदायमा फैलिने सम्भावना अझ बढेर गएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर जाँच नगरीकनै घर पठाउने प्रावधान छ ।
बैतडीको दोगदाकेदार गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिकामा क्वारेन्टिनमा स्वाब संकलन गरी रिपोर्ट नआउँदै घर पठाएका २५ जनाभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ । क्वारेन्टिनबाट घर गएको चार÷पाँच दिनपछि मात्रै उनीहरूलाई फोन गरेर आइसोलेसनमा बोलाइयो । वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शुभेषराज कायस्थ भन्छन्, ‘घरमा आइसोलेसनको व्यवस्था नहुनेबाट कोरोना समुदायमा फैलिने सम्भावना बढेर गएको छ ।’
सीमा नाकामा आवागमन जारी
सुदूरपश्चिमका चार सीमा नाका कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको पुलघाट लकडाउनका बेला पनि खुला छन् । भारतबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीका लागि ती चार वटै नाका अहिले पनि खुला छन् । सुरुका बेलाको जस्तो दैनिक १० हजारको आवागमन नभए पनि चार वटै नाकाबाट दैनिक एक हजारजति नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् ।
‘गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक पाँचछ सयजति नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा भन्छन्, ‘पहिलेजस्तो भीडभाड छैन । अहिले धेरै घटिसकेको छ । भारतमा पनि लकडाउन खुलिसक्यो । त्यहाँ काम पाइन्छ कि भनेर पनि नेपाल आउनेको संख्या घटेको होला ।’
त्यस्तै, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट पनि दैनिक तीनचार सयको संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । ‘कञ्चनपुरबाट दैनिक तीनचार नेपाली आइरहेका छन्,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालमा कोरोना संक्रिमतको संख्या बढेकाले पनि आवागमन घटेको हुन सक्छ । ‘अब नेपाल पनि सुरक्षित छैन’ भन्ने उनीहरूमा प¥यो होला ।’
क्वारेन्टिनमा चरम लापर्बाही
डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकामा कोरोना पुष्टि भएका एक जना वृद्ध त्यहाँबाट भागेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनी धनगढी आएको थाहा पाएपछि उनको खोजी भइरहेको छ ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका घर पठाएका ५८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिका वडा– १ र २ को क्वारेन्टिन बस्दै आएका ९३ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा सोमबार तीमध्ये ५८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
लम्की बहुमुखी क्याम्पस र राधास्वामी व्यास नेपालको भवनमा क्वारेन्टिनमा राखिएका उनीहरूलाई आइसोलेसनमा बोलाइएको छैन । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार पनि लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर मात्रै घर पठाउने प्रावधान छ । तर, असार १० गते उनीहरूको १४ दिन पुग्छ । ‘लक्षण नभएकाले, उनीहरूलाई घर पठाइएको हो,’ लम्कीचुहा नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसी भन्छिन् ।
बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले स्वाबको रिपोर्ट नआउँदै घर पठाएका पाँच जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । गाउँपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेको ३० दिन भइसकेको थियो, स्वाबको नमुना संकलन गरिएको १४ दिनसम्म पनि रिपोर्ट आएन । उनीहरूले नाराबाजी गरेपछि घर जान दिइएको हो ।’ चार दिन घरमा बसेका उनीहरूलाई घरबाट बोलाएर आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
‘क्वारेन्टिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ, त्यहाँ पनि वडा अध्यक्षहरूलाई वडा÷वडाको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको जिम्मा छ,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमर भन्छन्, ‘सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेकाले कोरोना समुदायमा फैलिने देखिन्छ ।’